LED Tasche, LED Camping Light, LED Headlamp Wholesale - Liveolight.com
Mampiasa ny CREE XP-E2 R2 LED, izay manana ny ampahany betsaka amin'ny 130 lumens. Powered by 2xAAA batteries alkaline, miaraka amin'ny 3 ...
♥ Ny fitaovana maoderina manara-penitra dia mahatonga anao ho mora kokoa aminao ny manova ny fomba 6. ♥ Mampiasa ny CREE XM-L2 U2 LED, ...
♥ Hamelatra ny loha mba hampitombo ny fifantohana amin'ny mifantoka amin'ny tanana iray ihany. ♥ Mampiasa ny CREE MLE LED, ...
♥ Atsofao ny lohanao mba tsy hitombo ny fifantohana amin'ny fifantohana. ♥ dia mampiasa ny CREE XM-L2 T6 LED, miaraka amin'ny vokatra avo lenta ...
♥ IPX8 tsy mandeha amin'ny rano dia midika fa afaka manidina amin'ny halavan'ny metan'ny 10 ianao amin'ny alalan'ny jiro. ♥ Mampiasa ny CREE ...
♥ Loko fampiroboroboana fampiroboroboana, miaraka amin'ny endriny azo atao. ♥ Powered by alkaline batteries 2xAA, miaraka amin'ny ora 7 ora. ♥
Mifandraisa aminay ny lisitry ny vidiny, ny horonan-tsary, ny sary sns. Raha manana fanontaniana ianao, azafady mba fantaro. Hamaly anao izahay ao anatin'ny ora 12
STARLITE dia orinasan'ny HENDS-ON LIGHTING, izay napetraka tao Jan 2009. Mianatra isika amin'ny fanaovana sy ny fihazonana ny fanatsarana. Noho izany dia tsy mitsahatra mieritreritra ny zavatra ilain'ny mpanjifantsika isika. Manao ny fitaovana fanairana amin'ny fomba samihafa isika. Mifantoka amin'ny fanatsarana sy fanatsarana ny vokatra isika amin'ny fametrahana ny filàna marina. Mikarakara ny traikefan'ireo mpampiasa sy fahatsapana ho an'ny mpamono afo, ny securités, ny mpihaza, ny mpanarato, ny mpifankatia ivelany, ny mpankafy ara-panatanjahan-tena, ny raharaha momba ny kambana sy ny zaridaina. Mikarakara ny traikefa iainana rehetra eran-tany isika izay mitondra any amin'ny hevitra vaovao ...
Ny jiro maivana matanjaka indrindra dia SFL-A176N
TOKO FAHARETANA (1)
Nahoana ny olon-drehetra no tokony hitondra jiro?
Nahoana ianao no mividy fantsona?
Takam-pamokarana hafahafa sy ny tariny
Avelao ny jiro tsara indrindra rehefa ilaina
Fampidirana ny Battery
300 manjelanjelatra 3 modes car chargeled flashlights dia malaza populaire
Quick Details Type: Flashlights Light Source: LED LED Light Source: CREE XP-G2 R5 * 1 Type: Lighting Rechargeable Place Origin: Zhejiang, China (Mainland) Brand Name: led flashlights popular popular Model Number: SFL-1658 led flashlights Ny karazana battera azo amidy be loatra: 16340 Li-ion 600mAh Usage: Source power source: Periodical Battery Lighting Period (h): ...
Tafiditra ao amin'ny lozam-pifamoivoizana: Zhejiang, China (Mainland) Brand Name: lith led flashlight Model Number: SFL-A176N power lite led flashlight Product name: power lite led flashlight Battery type: 3 * D Power output: 13.5W Color temp: 6400K Feno hafanam-po: 100% -1500lm 50% -700lm 25% -350lm Flash-1500lm SOS-1500lm Beam Distans: 100% -370m 50% -244m 25% -86m Fiarovana amin'ny fiantraikany: ...
Mampiasa ny CREE XP-E2 R2 LED, izay manana ny ampahany betsaka amin'ny 130 lumens. Powered by alkaline batteries 2xAAA, miaraka amin'ny ora 3 ora. Misy amin'ny loko 6 samihafa ary azonao atao koa ny mampifanaraka ny loko tianao indrindra. Ny fihoaram-pefy avo lenta, ny vy vita vita ary ny elektrophorétique dia mifanaraka amin'ny fomba itiavanao azy. Indraindray 130 ...